Ismaaciil Qodax: “Mustafe wanaag buu bilaabay … laakiin dhibaatada meesha taal waa ka baaxad weyntahay” (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 16, 2019 1:46 b 0
Ismaaciil Goorse Qodax waa aqoonyahan haysta shahaadada PHD, kuna takhasusay baadigoobka qof ahaansho, mid gobol, kan dowlo iyo waliba dhismaha haykal dowladnimo. Waxa uu ku dhashay magaalada Diridhaba, waxa uu darsaa juquraafiga-siyaasadeysan ee Geeska Afrika, waxa uuna u doodaa siyaasadda gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Ismaaciil Qodax waxaa uu ayidsanyahay midnimada Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu rumeysanyahay in qofka Soomaaliga ah ha ku dhasho Kenya, Itoobiya ama Jabuuti uu yahay muwaadin Soomaaliyeed.
Aqoonyahan Ismaaciil Qodax ayaa Radio Daljir waraysi uu siiyey ku falaanqaynaya siyaasadda Gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Qodax ayaa sheegay in Soomaalidu aysan faham buuxa ka haysan siyaasadda fog ee Itoobiya oo ku salaysan liidid iyo lahaansho.
Ismaaciil ayaa nasiibdarro ku tilmaamay kala qaybsanaanta joogtada ah ee Soomaalida (meel kasta oo ay joogaan) iyo meesha siyaasadda Itoobiya ay maanta marayso ayada oo ay jiraan ururo kala rayi duwan oo qabiilo u kala fadhiya sida ONLF, HEEGO iyo DULMI-DIID.